Mpitari-Pivavahana Mayana Noraràna tsy Hiditra ny Toera-Panompoany Tany Goatemalà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2012 22:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Italiano, Português, 繁體中文, 简体中文, English
Eny ambony sehatra, tsy ireo vazimba teratany no nanao ny fiakanjoany ao anatina fampisehoana fanalan'andro ary mpanatrika tsy vazimba teratany avy amin'ny vato nasondrotry ny tany goatemalteka no naka ny ivon-toerana manan-danja indrindra amin'ny fanaovanm-pombafomba Maya, antsoina hoe Tikal, miandry ny fahatongavan'ny vanim-potoana vaovao. Navela tao ivelany ny vazimba teratany, nanao fihetsiketsehana izy ireo tamin'ny filalaovana ny zavamaneno nentim-paharazana antsoina hoe Marimba.
Nitatitra vao maraimben'ny 20 desambra ny Federasiona Goatemaltekan'ny Radio Maya fa tsy navela hiditra tao amin'ny Valan-javaboarin'i Tikal, toera-panaovam-pombafomban'ny 13 Baktun ireo manampahefan'ny Mam – komitin'ny Maya. Ny tompon'andraikitry ny fizahantany goatemalteka no nandrara azy ireo tsy hiditra, tamin'ny filazana fa mikatona noho ny fampisehoana izay hotontosaina tao ny toera-panaovana fombafomba.
Tonga aloha be avy amin'ny lafivalon'ny firenena ireo lehilahy sy vehivavy hikarakara ny fombafomba nentim-paharazana saingy najanona tao ivelany mandra-pahatongan'ny tamin'ny sasakalina latsaka fahefany alina, fotoana namelana ny mpitari-pivavahana hanatontosa ny lanonana nentim-paharazana. Vitsy an'isa moa ny mpanatrika avy amin'ny vazimba teratany noho ny sady tsy fanasana azy ireo no tsy famelana azy ireo hiditra ny foiben'ny toera-pombafomba. Azonao trohina eto ny fitantarana amin'ny alalan'ny feo [es].
Tsy izao ny fanilikilihana voalohany nanjò ny vahoaka Maya. Efa nambaran'ny Komitim-bahoaka Maya Andrefana mialoha ny adin-tsainy :